Isbadalka cimilada wuxuu sababi doonaa baabi'inta dulinleyda | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimiladu wuxuu sababi doonaa baabi'inta dulin-ku-nool
Isbeddelka cimilada wuxuu ku keenayaa isbeddelo badan nidaamka deegaanka deegaanka meeraha. Heerkulka sii kordhaya wuxuu baddelayaa noocyada noocyada badan wuxuuna beddelaa is-weydaarsiga DNA, taasoo keenta is-weydaarsiga hidaha iyo kaladuwanaanta.
Intaa waxaa sii dheer, saameynta kala duwan ee isbeddelka cimilada ayaa sababi karta baabi'inta saddex meelood meel ka mid ah noocyada dulinka 2070. Tani waxay si dhab ah wax uga beddeli kartaa nidaamka deegaanka iyo isu dheelitirka deegaanka. Sidee cimiladu saameyn ugu yeelan kartaa nidaamka deegaanka.
1 Dulinka iyo isbedelka cimilada
2 Doorka dulin ee nidaamka deegaanka
Dulinka iyo isbedelka cimilada
Daraasad caalami ah oo lagu daabacay joornaalka Sayniska Hormarinta ayaa si isku mid ah u lafa-gurtay dulin-qabe iyo is-qabqabsi aan dulin lahayn. Taasi waa, kuwa ku dul dul noole xayawaan kale, iyadoo ka faa’iideysaneysa kheyraadkeeda isla markaana ilaalinaysa nafteeda iyo, dhanka kale, kuwa leh xiriir iskaashi oo labada noocba ay ku guuleystaan ​​(tusaale ahaan, xiriirka ka dhexeeya lichen iyo fungus).
Si tan loo sameeyo, qorayaashu waxay isticmaaleen xog-ururin ballaaran oo caalami ah oo ah caarada shimbiraha, taas oo u dhaqanta sida "xaaqe" baalasha shimbiraha. Iyada oo ay ugu wacan tahay isbeddelka cimilada iyo heerkulka oo sii kordhaya, nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah ayaa ku socda isbaddallo lama filaan ah. Sidaas darteed, dulinku waa ka khatar badan yahay kooxaha kale ee noolaha. Kooxdan noolaha ah waxaa ka mid ah dixiriga, dixiriga dixiriga ah, gooryaanka, boodada, shilinta, injirta, iyo dulinleyda kale.
Doorka dulin ee nidaamka deegaanka
Inta badan dulinleyda aan ognahay waxay ku sababi karaan nooc ka mid ah cudur dadka, xoolaha iyo xayawaannada kale. Si kastaba ha noqotee, dulinnadani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ka shaqeynta nidaamka deegaanka, maadaama ay gacan ka geystaan ​​xakameynta caafimaadka dadka duurjoogta ah ayna ilaaliyaan wareegga tamarta iyadoo loo marayo shabakadaha trophic
Sababtoo ah dulinleyaal badani waxay leeyihiin wareegyo nololeed oo ku lug leh maraya noocyo kala duwan oo martida loo yahay, tirada iyo kala duwanaanshaha dulin ku jira nidaamka deegaanka waxaa loo adeegsadaa inay tahay aqoonsi heer caafimaad.
Iyagoo adeegsanaya saadaasha cimilada, cilmi baarayaashu waxay isbarbar dhigeen sida saameynta isbedelka cimilada ay noqon doonto xaaladaha kala duwan in ka badan 457 nooc oo dulin ah. Dulinka ayaa ka khatar badan noocyada halka lagu xareeyo.
Intaas waxaa sii dheer, qaabka cimilada ugu musiibada badan ayaa saadaaliyay in ka badan seddex meelood meel noocyada dulinku way baabi'i karaan 2070, halka moodooyinka ugu rajada fiican ay muujiyeen in luminta noocyada ay noqon doonto 10%.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Isbedelka cimiladu wuxuu sababi doonaa baabi'inta dulin-ku-nool
8,2 dhulgariir ayaa sababay waxyeelo Mexico iyo digniinta tsunami